I-Wholesale Folding I-J Bar Kayak Roof Rack 2 PCS kanye nama-PC angu-4 Isethi Ngayinye Yebhodi Le-Canoe Surf kanye ne-SUP enama-Pcs angu-4 Abopha Phansi Abakhiqizi nabaphakeli |Izesekeli zomholi
Ukugoqa i-J Bar Kayak Roof Rack 2 PCS kanye nama-PC angu-4 Isethi Ngayinye Yebhodi Le-Canoe Surf kanye ne-SUP enama-4 Pcs Tie Down Straps
Izesekeli zomholi ezigoqa i-kayak rack yemoto/i-SUV inomklamo omuhle kakhulu onezici zayo eziwusizo eziyenza ibe into elula, ukukhetha okuwusizo kakhulu ngoba ayikwazi nje ukubamba i-kayak noma isikebhe sakho ngokuphephile kodwa futhi ikunikeze nosizo lapho bayayilayisha, ngayo, unendlela elula kakhulu yokuletha i-kayak noma isikebhe sakho endaweni ethile njengechibi elithile lokukhempa.
Into NO.: 103481, 104067
Ukukhempa, ukuhamba ngesikebhe
(Qaphela: kwesobunxele esithombeni esiphezulu ngu-103481, ngezansi ngu-104067.)
- I-kayak rack yesitayela esihle kakhulu se-J inweba izindawo eziwusizo kakhulu zemoto yakho.
- I-Hardware enomsebenzi ongagqwali okulula ukuyivula/ukuvala.
- Uhlaka lwensimbi olusindayo olunamaphedi alungisekayo.
- Kulula ukufaka nokususa.
● Izesekeli zomholi we-heavy-duty yokwakha i-kayak rack inamandla kunomunye ukwakhiwa.Ku-103481, yenziwe ngeshubhu lensimbi elinobubanzi obungu-22 mm nobukhulu obungu-1.45 mm, insimbi emnyama eboshwe ngempuphu, ehlala isikhathi eside futhi engagqwali, ingasetshenziswa kuzo zonke izimo zezulu isikhathi eside, ngo-104067, yenziwe. yamaalloyi e-aluminium yezinga eliphezulu le-anodized aviation enobubanzi obungu-22 mm nogqinsi ongu-1.55 mm, isisindo esilula, ehlala isikhathi eside, futhi ekwazi ukumelana nokugqwala.I-100 LBS ihloliwe, ilula futhi kulula ukuyihambisa.
● Idizayini egoqekayo kanye ne-ergonomic ekhishwa ngokushesha yakho kokubili okungu-103481 kanye ne-104067 kuzenza kube lula ukugoqa nokuphakamisa kunamanye ama-rack, womabili lawa ma-kayak ama-2 kanye ne-4 kayak roof rack angagoqwa futhi abekwe phansi uma ingasetshenziswa, icace kalula. futhi kalula, okwenza imoto yakho ishayelwe egalaji ngaphandle kokukhipha i-kayak rack.
● I-foam padding kanye ne-pedal pedal design yayo, eyaziwa nangokuthi idizayini yokunciphisa ukuklwebheka, inganciphisa ukuklwebheka ku-kayak yakho futhi ivimbele i-kayak yakho, ibhodi lokuntweza, kanye nesikebhe ukuthi singakhuhli.
● Ngedizayini yayo yokukhweza yendawo yonke, le rack ye-kayak ihambisana neningi lama-crossbar njengesikwele, imboni, kanye ne-aerodynamic, kodwa ibha eyindilinga ayifakiwe.
● Kokubili Izinsiza Zokuhola i-aluminium kanye nama-Iron kayak racks, ahambisana namabhande ahambisanayo angu-4 pcs, angasetshenziselwa ukuthwala i-kayak, i-SUP, isikebhe, i-surfboard, njll., okusho ukuthi kungaba i-kayak rack, i-SUP rack, i-a. i-canoe rack, kanye ne-surfboard rack yemoto ngesikhathi esifanayo.
- amapheya ama-2 (ama-rack ama-4 ama-kayak angu-2) we-103481, i-1 pair (ama-racks ama-2) we-104067.
Ifanele inombolo enkulu yezikwele zasefekthri nangemuva kwemakethe, ama-oval, nama-crossbar ayisicaba.Sicela uqinisekise usayizi wayo, uhlobo, kanye nokuma ukuze uqinisekise ukuthi le rakhi ye-kayak iyilokho kanye okudingayo.
Okwedlule: Ipheya engu-1 kanye namapheya angu-2 we-J Bar Rooftop Kayak Rack enezintambo ezibophezelayo zeBhodi Lesikebhe kanye ne-Surf
Olandelayo: I-17pcs Isethi Egcwele Embossed Universal Embossed Low Back Isihlalo Sesihlalo Semoto Yamaloli e-SUV